I-Arild Bed kunye negumbi lesidlo sakusasa eMntla - I-Airbnb
I-Arild Bed kunye negumbi lesidlo sakusasa eMntla
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLotta
Eli gumbi leendwendwe likumgangatho woku-1 kwaye linembono entle ngakwi-Arild's Winery kunye nezidiliya. Unokufikelela ngokukhululekileyo kwigumbi lokuhlambela elinye kunye neshawari eyahlukileyo kumgangatho woku-1 ekwabelwana ngawo neendwendwe kwigumbi laseMzantsi.
Igumbi leendwendwe lineebhedi ezimbini ze-90 cm ezime ecaleni kwenye.
Iibhedi zenziwe ngelinen entsha yokulala kunye neetawuli zokuhlambela ezintsha zinikezelwe.
Isidlo sakusasa kunye nokujonga ukucoca kufakiwe.
Sinikezela nge "classic" Ibhedi kunye nesidlo sakusasa. Simema iindwendwe ukuba zihlale kunye nathi, sabelane nathi ngekhaya lethu kwaye sitye isidlo sakusasa kwikhitshi yethu yelizwe elikhulu okanye egadini ukuba imozulu intle. Yindlu yakudala eyi-pittoresque, eyakhiwa ngo-1862, inomtsalane kunye noburhabaxa.
4.97 · Izimvo eziyi-92
Indawo yethu ikwindawo ezolileyo engaphandle kwe-Arild kunye nomgama wokuhamba ezantsi kwizibuko lase-Arild elineembono ezintle kunye neendawo zokutyela ezimbalwa ezilungileyo. Indawo yethu ikufuphi ne-Arilds vingård enendawo yokutyela emnandi yasehlotyeni kunye nokungcamla kwewayini. Indlela yebhayisekile iKattegattleden idlula kwindawo yethu.
Ubumelwane bunikeza ukuhamba okukhulu kwindalo entle ecaleni kolwandle okanye kwintaba yaseKullaberg. Yiba nokuhamba phezu kwentaba ukuya eNimis, ulwakhiwo oludumileyo lwamaplanga olwenziwe yigcisa uLars Vilks.
Kukho iikhilomitha ezi-5 ukuya eMölle, enye ilali ye-pittoresque kwi-peninsula yaseKullahalvön enezibuko elihle kunye neendawo zokutyela ezimbalwa ezilungileyo.
EHöganäs, malunga ne-10km ukuya emazantsi ungafumana ezinye iivenkile kunye neeresityu. Ungaphoswa yiMagasin 36 eneendawo zokutyela ezintle, imarike yokutya, ikhefi kunye nendawo yokutyela.
Kukho iikhosi zegalufa ezi-2 kule ndawo, iSt Arilds golfklubb kunye neMölle golfklubb.
Umbuki zindwendwe ngu- Lotta
Siyazamkela iindwendwe zethu ngokobuqu kwaye sikhona ukuze siqinisekise ukuba yonke into isebenza ngendlela ebekufanele ngayo.
Siyavuya ukunxibelelana neendwendwe zethu, kodwa nokuvumela iindwendwe zethu ukuba zibebucala ngokuxhomekeke kwiimfuno kunye neminqweno yazo.
Siyavuya ukunxibelelana neendwendwe zethu, kodwa…